Hutano Dhipatimendi Vaccination Gadziridza Press Regedzera - princetoncovid.org
Hutano Dhipatimendi Vaccination Gadziridza Press Regedzera
Posted byTim Quinn	 January 19, 2021
HWEPENYU Dhipatimendi Rinopa Rinovandudzwa Ruzivo NEZVE VACCINE KUWANIKWA
Iyo Princeton Hutano Dhipatimendi parizvino iri kuwana huwandu hwakawanda hwekufona uye maemail ane chekuita nekuwanikwa kwemushonga weCCVID-19. Panguva ino, pane zvimwe zvakakosha zvakaitika kuti zvidzikise nzira yekugovera mushonga. Chinonyanya kukosha pane izvo zviitiko ndeye kubvumwa kuchangobva kuitwa nehurumende yemubatanidzwa kuti kwechinguva, pane kushomeka kwejekiseni. Iyi nhau inosuruvarisa inouya panguva iyo nyika yedu yakawedzera kuyedza kutora pfuti mumawoko evanhu nekugadzira makiriniki anopfuura mazana matatu, kuunganidza simba rekudzivirira revazvipiri nevashandi vakabhadharwa kuvashandira, kungoita kuti kuedza uku kukanganiswe nekutendeuka uku kusingatarisirwe. yezviitiko.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kusati kwave kushomeka kwechinguva, veMercer County Public Health Officers 'Association vakaunganidza akateedzana emakiriniki akabaya vanhu vazhinji vanokodzera. Pakaziviswa naGavhuna Murphy neChitatu chadarika vachiwedzera mukana, vanhu vanokodzera pamitauro dzakasiyana siyana dzakaziviswa uye vakagadzwa zvichienderana nenhamba yemishonga yekudzivirira iripo. Maitiro aya akagarisa vanhu vazhinji vanokodzera sekuwanisa kwedu mushonga wekurapa uripo. Iko kunononoka kubviswa kwekudzivirira inyaya yenyika inokanganisa maitiro edu epasi rose ekuparadzira uye ichikanganisa isu tese.
Kuwedzera kwaGavhuna Murphy kwevanokodzera vanodzivirira majekiseni musi waNdira 14, 2021, zvinoreva kuti vagari veNew Jersey nevanhu vanoshanda muNJ vanogona kurarama kunze kwenyika stateover makore makumi matanhatu nemashanu vanokodzera kupihwa mushonga weCovid-65. Pamusoro pezvo, vakuru vezera ripi zvaro vane mamiriro ezvinhu ari panjodzi yekuwedzera kwehurwere hwakanyanya kubva kuhutachiona hunokonzera Covid-19 vanokodzerawo. Ichi chiziviso chakonzera kuti zviwanikwa zvemunharaunda nehurumende zviwedzerwe mukuedza kwedu kuronga nguva dzekugadzwa. Kunyangwe kiriniki yekudzivirira veMercer County kuCURE Arena muTrenton iri kutarisirwa kuvhurwa zvakapfava svondo rino, iine imwe kiriniki yakarongerwa kuvhura Ndira 19 paMercer County Community College, kushomeka kwemajekiseni kuri kuramba kuchinonoka kugovera kwavo mumaoko yevanhu vanokodzera. Iyo CURE Arena saiti inotarisirwa kuti igamuchire mazana mazana masere pavhiki. Parizvino, nyika irikugamuchira mishonga yekudzivirira muzvikamu zvinosvika zviuru zana zvemadhora pasvondo; vakuru vehurumende vanotaura kuti nyika yanga ichitarisira kupihwa mazana mazana mana ezviyero pasvondo kuzadzisa zvido zvedu pari zvino.
Chimwe chikamu chekuburitsa icho chakanonoka kupfuura zvaifungidzirwa chikamu chemubatanidzwa kuona kugoverwa kwemajekiseni kuvagari nevashandi venzvimbo dzedu dzekuchengetedza kwenguva refu. Majekiseni aya ari kubatwa neCVS nemaWalgreens.
Makiriniki emuno anozorongwa zvakare patinogamuchira madosi ekupa. Tichazivisa chero mikana mitsva yemuno yekugamuchira mushonga weCovid-19 kuburikidza nemaemail kune avo vari patinotumira, kuburikidza nepepanhau, kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunharaunda uye pawebhusaiti yedu. www.neworld.tec uye mapeji enhau. Tichagovanawo ruzivo nezve kuwanikwa kwejekiseni panzvimbo dzese mudunhu medu dzatinoziva. Parizvino ina dzematanhatu eMega Makiriniki eNew Jersey ari kushanda. Vaviri vasara vari kutarisirwa kumuka nekumhanya munguva pfupi iri kutevera.
Ndokumbirawo urambe uchitevera ese COVID-19 ekuchengetedza matanho sekupfeka chifukidzo, kugeza maoko ako nguva zhinji, kuchengeta tsoka nhanhatu, kuremedza hutachiona uye kuvhara kumeso kwako kana uchikosora kana kukosora. Makiriniki mudunhu rese reNew Jersey nedzimwe nyika, ese anokanganiswa nekushomeka kwekudzivirira kwechinguva. Vanhu vakanyoreswa kuburikidza newebhu webhu portal vanozoziviswawo nezvenzvimbo dzekuronga musangano sezvavanowanikwa. Dzinotevera nzvimbo dzinoverengeka dzinogona kupa kugadzwa uye nerumwe ruzivo pazvinowanikwa.
Tichaenderera mberi tichiedza kuyedza kwedu kukuru kukushandira iwe uye kugashira kugoverwa kwenzvimbo kwejekiseni re COVID-19. Ndatenda nekushivirira kwako!
Kwemibvunzo nezve coronavirus, iyo New Jersey Dhipatimendi rehutano ine COVID-19 Hotline, 24/7, pa 1-800-222-1222. Dhipatimendi rehutano rePrinceton rinogona kusvika pa (609)497-7608 kune rumwe ruzivo.
Zvese zvinobatika zvinobatika zvinofanirwa kuendeswa kuna Fred Williams, ne e-mail, fwilliams@princetonnj.va
Princeton Youth Advisory Committee COVID-19 meseji